सस्तो प्रचारबाजीले एनआरएनहरु असुरक्षित
विश्वमा छरिएर रहेका नेपालीहरुको नेपाल आगमन भइरहेको छ । कारण हो, यही अक्टोबर १५ देखि १७ सम्म हुने विश्व सम्मेलन । भन्नलाई यसो भनिन्छ, तर मूल जड भनेको निर्वाचन नै हो । यदी सर्वसम्मतीबाट उमेर चयन भइसकेको भए यति महङ्गो प्लेनको टिकट तिरेर यति धेरै एनआरएनहरु नेपाल आउने थिएनन्, मुस्किलले २ सय जना पुग्थे । अहिले काठमाडौंमा संस्थापक राम प्रताप थापा, पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने, संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महताको कुनै नगरौँ, उनी नेपाल रहँदै आएका छन् । त्यसै गरी अध्यक्ष भवन भट्ट, उपाध्यक्ष तथा अध्यक्षका प्रत्यासी कुमार पन्त, उपाध्यक्ष तथा अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्य, कोषाध्यक्षका उम्मेदवार डा महेशकुमार श्रेष्ठ, सहकोषाध्यक्ष प्रत्यासी सोम सापकोटा अर्का उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरु सोनाम लामा, सपिला राजभण्डारी, सुदन थापा, महासचिवका उम्मेदवार जानकी गुरुङलगायत सयौँ एनआरएनहरु काठमाडौंमा छन् ।
मुख्य उद्देश्य भनेको विश्व सम्मेलन सँग सँगै हुने निर्वाचन हो । अधिकांश अभियन्ताहरु को कसको कित्तामा उभिने लगभग निश्चित भइसकेको छ । अब मात्र बाँकी छ, जो ‘हेर र पर्ख’मा रहेका एनआरएनहरुको निर्णय आउन । जुन प्रकारले प्रतिनिधिहरुको संख्या आइरहेको करिब २८ सय, यदी आवेदन दिएकाहरु सबै सहभागी हुने भए सम्मेलनको व्यवस्थापन गर्नेलाई पनि ठूलो चुनौती बन्ने देखिएको छ । जुन प्रकारले गएको सम्मेलनहरुमा २०१७ को सम्मेलन सबैभन्दा ठूलो थियो, जसमा करिब २ हजार सहभागी थिए भने यसपटक दुई हजार आठ सयले आवेदन दिएका छन् । यसरी हेर्दा यस पटकको विश्व सम्मेलन वा निर्वाचन त्यत्ति सहजरुपमा सम्पन्न हुनेमा शंका गर्न सकिन्छ । अझै यसमाथि उम्मेदवारहरुको प्रचार प्रसार र प्रचार प्रसारमा खटिनेहरुको दम्भ देख्दा यो नेपालमा गरिने आम निर्वाचन भन्दा रवाफिलो र भड्किलो तथा खर्चिलो हुने निश्चित छ । सामाजिक संगठनको निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएको यो ‘इगो’लाई हेर्ने हो भने एनआरएन अब कुनै सामाजिक संगठन रहेन । यसलाई नेपालबाहिर बस्ने नेपालीको सरकार भन्दा फरक नपर्ला ।
संयोगको या घटना, अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्यको तीन तले २० वटा कोठा भएको घरमा स्वयम् कुल सुत्ने कोठाको झ्यालमा आक्रमण गरिएको खबर सार्वजनिक भएको छ । जुन झ्यालमा आक्रमण भएको थियो, सोही झ्यालपट्टि कुल सिरानी राखेर सुत्थे । यदी यो आक्रमण नै हो भने एनआरएनहरु सुरक्षा के होला, वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपालमै बसेका नेपाली स्वयम् आफैं सुरक्षित छु भन्नेमा ढुक्क छैनन्, यस्तो बेलामा एनआरएनको घरमा आक्रमण भएको खबर आउनुले अब एनआरएनहरु कति सुरक्षित छन् भन्नेमा विश्लेषण गर्ने बेला आएको छ ।
यदी कुनै कारणले झ्यालका सीसा फुटेका हुन् भने सामान्यमा रुपमा लिन सकिएला, तर नियोजित रुपमा आक्रमण भएको हो भने कसले र किन ग¥यो ? कतै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा आएका प्रचारमुखी समाचारले यस्तो घटना निम्त्याएको हुन सक्ने एनआरएनभित्र हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । सुन्नमा आएको छ, एनआरएनहरु आफ्नो बासस्थान परिवर्तन गर्दै रात गुजारिरहेका छन् ।
एनआरएनमा कुमार पन्त नेतृत्वको १०० दिनः महासचिवको खुराफातदेखि पूर्व अध्यक्षको गोप्य योजनासम्म